Liibiya: Wiil uu dhalay Qadaafi oo dil lagu xukumay – Radio Muqdisho
Liibiya: Wiil uu dhalay Qadaafi oo dil lagu xukumay
Maxkamad ku taalla dalka Liibiya ayaa dil ku xukuntay wiilka uu dhalay hoggaamiyihii hore ee Liibiya Mucamal Al-Qadaafi ee lagu magacaabo Saif al-Islam, iyo sideed qof oo kale oo lagu eedeeyay inay galeen dambiyo dagaal, intii uu socday kacdoonkii Liibiya ee xukunka looga tuuray kaddibna lagu dilay Mucamal Al-Qadaafi 2011kii.
Seyfal Islaam iyo shakhsiyaad kale oo ka tirsanaa dowladdii hore ee Libiya ayaa xirnaa muddooyinkii la soo dhaafay, ayagoo lagu eedeeyay in ay waxyeeleen dadkii dhigayay mudaharaadkii lagu riday dowladdii uu hoggaaminayay Qadaafi.
Saif al-Islam ma uusan joogin maxkamadda xukunka ku ridday oo soo bandhigtay cadddeymo muuqaal ah oo muujinaya dambiga lagu soo oogay.
Waxaa qabatay Seyful-Islam koox ka mid ahayd dhaqdhaqii riday dowladda oo ku sugan degaanka Zintan, kuwaas oo diiday inay sii daayaan.
Madixii hore ee sirdoonka Liibiya Abdallah al-Senousi, ayaa ka mid ah dadka wajaha xukunka dilka ah.
Dadka lagu riday xukunka waxaa u bannaan inay racfaan ka qaataan sida ay sheegayaanw ararka laga helayo magaalada Tripoli ee dalka Liibiya.
Dadka la soo eedeeyay qaarkood ayaa lagu riday xukunno u dhaxeeya 5 sano ilaa xabsi daa’in.
Dhagayso Warka Subaxnimo 28.07.2015
NATO oo ka shiraya xaaladda xadka Siiriya iyo Turkiga